नेपालमा पनि टिकटकले यस्तो गर्दै अबके हुँनेहाल हेर्नुहोस। – Onlines Time
नेपालमा पनि टिकटकले यस्तो गर्दै अबके हुँनेहाल हेर्नुहोस।
January 27, 2021 onlinestimeLeaveaComment on नेपालमा पनि टिकटकले यस्तो गर्दै अबके हुँनेहाल हेर्नुहोस।
जतिसुकै बिजी भए पनि २ मिनेट समय दिएर अवश्य पढ्नुहोला : तपाईंको जीवनमा पक्कै परिवर्तन आउनेछ ! (सेयर गराै)
भागरथी ह’त्या प्रक’रण: भागरथीको मोबाइलमा यस्तो भेटियो, ह’त्या’रालाई कडा कार’बाहीको माग !(न्याय काे लागि सेयर गराै)
February 8, 2021 February 14, 2021 onlinestime
सरकारकाे यस्तो निर्णय: असार १ देखि देशभरका विद्यालय खुल्ने, विद्यार्थीभर्ना थाल्न यस्तो निर्देशन, भिडियो हेर्नुहोस (जानकारीका लागि सेयर गराै)
खुसिको ख’बर ! कन्चनको घ’टना अब मानव अधिकार आयोगले हेर्ने ,यस्तो भयो निर्णय (भिडियो हेर्नुस् )
March 27, 2021 onlinestime